“Cabdiraxman Cirro Waxa Uu Xisbiga WADDANI U Samaystay In Uu Somaliland Ku Burburiyo” Waa Hadal Madhan Iyo Hawo Been Ah” Maxamed Baashe Xaji Xasan . – somalilandtoday.com
(SLT-London)Waxa iyana meel-ka-dhac kale ah “raggii gobta ahaa ee aan waxba hiban jirin marka doorasho la galo ee wasiirku carrabka ku dhuftay!”.
Cirro in aannu Waddani kelidii lahayn, isna siin waxa ka marag kacaya hadalkii maalintii uu waddanka yimi uu ku yidhi “marka aan madaxda xisbiga la tashado ayaan shir haraa’id qabanayaa”. Hadalkiisa maantu waa go’aan xusbi saw ma aha? Maxaa loo qofaynayaa?
Qodobka labaad ee gobannimada iyo gunnimada kala soorayaa ma aha afkii mas’uuliyiinta qaran iyo kii dhaqanka siyaasadda midna.
Teeda kale doorashadii iyo in Muuse Biixi madaxweyne yahay muran kama noola, Cabdiraxmaan Cirrona hibasho kama uu muujin ee waxa uu ka hadlay go’aankii kharribnaa ee Kulmiye iyo UCID wada gaadheen ee ahaa in ay qabanayaan doorasho uu Waddani ka maqan yahay, taas oo u muuqata jar-iska-xoornimo aan loo meel deyin iyo go’aanka ay taas iyagu (Waddani) ka qaateen.
Hore ayaan uga tibaax bixiyey in aamusnaantu u roon tahay inta badan mas’uuliyiinta sare sare ee xukuumadda Muuse Biixi oo mar kasta oo ay hadlaan wax dhooqeeya, xalna aan keenin ee wax uun sii murgiya ama xumeeya.
Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga Waddaniyow ma geydaan aflagaaddadaas aan loo miidaanka deyin ee wasiirka dhaqanka, wacyigelinta iyo warfaafinta ka yeedhay, ogaadana in xil iyo mas’uuliyad dheeraad ahi dushiinna timi oo la idiin ka baahan yahay waayeelnimo buuxin karta dayaca ka soo baxay kaalintii hoggaaminta ee hay’adda fulinta oo dhalliilo aan la dhayalsan karini ka muuqdaan.